Home News Halkeey ku danbeeyeen hubkii iyo saanadii Sacuudiga ugu deeqday Soomaaliya?
Halkeey ku danbeeyeen hubkii iyo saanadii Sacuudiga ugu deeqday Soomaaliya?
Waxaa mudo laga joogo asbuucyo si qarsoodi ah uga soo degay dekada magaaladda Muqadishu saanad iyo hub ka yimid dalka shiinaha. Hubkaas waxaa lacagtiisa bixisay dowlada Sacuudi Careebiya iyada oo aan la cadeeynin sababta hubkaas faraha badan leh Soomaaliya loogu soo diray iyo in ujeedo kale ka danbeeysay talabadaas
Hubkaan ayaa ka koobnaa 162 Kontaynar (Containers) oo ay ku jiraan 42 Million oo saanad ah iyo hub noocyadiisa kala duwan. Waxaa wax lala yaabo ah in Soomaaliya lagu soo daadgureeyo sanaada intaa la eg iyada oo la og yahay in ayan Soomaaliya xiligan qaadi karin hub intaa la eg.
Warar hoose oo ay heshasy shabakada Muqdishu Online ayaa sheegaya in qaybo badan oo ka mid ah hubkaas la dhacay laguna iibiyay suuqayadda magaalada Muqadishu iyo qaar ka mid ah goboladda Dalka. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in iibinta hubka iyo rarkiisaba uu qayb ku leeyihiin ganacsato ay isku heeb yihiin RW Xassan Cali Kheyre.
Waxaa maalintii shalay ahayd magaladda Muqdishu yimid koox ka socoto Jimciyadda quruumaha ka dhaxeeysa oo loo diray in ay baaritaan ku sameeyaan hubkaas iyo meeshii uu ku danbeeyay. Saraakiishaas ayaa la geeyay halkii uu yiilay hubkaas, waxaase loo diiday in la furo Konteenaradii uu hubka ku jiray. Ra’iisal Wasaare Kheyre ayaa diiday in aan la furin Konteenaradii uu ku jiray hubka. Tan ayaana xaqiijisay tuhunkii beesha caalamka ee la xaririy meeshii uu ku danbeeyay hubkii Sacuudiga soo diray.
Arintaan ayaa waxaa ay dhalisay in uu soo dhexgalo wakiilka gaarka ah xog’hayaha guud ee Qaramada Midoobay Mudane Michael Keating. Wakiilka ayaa uga digay Dowlada Soomaaliya in ay ka hor timaado qaraaradii Qaramada Midoobay oo ay Soomaaliya wax ka saxiixday.
Waxaa muuqata in hubkii iyo saanadii la iibsaday, waxaana macquul ah in ay gacanta u gashay kooxda argagaxisada Al Sbabaab. Dabayaqada bisha Maarso ayaa la filayaa in Hay’adda Qaramada Midoobay ee Koormeerka Soomaaliya ay soo saari doonto warbixn faah-faahjin doonta hubka iyo cidii iibsatay.
Maalintii shalay ayaa ay ahayd markii la bililiqaystay Hubkii NISA iyo kii laga soo ururiyay shacabka Magaalada Muqadshu marka la qaaday ololahii been abuurka ahaa ee xasilinta Caasimadda.